Umhleli wephephancwadi odibene neTshayina wafuna uncedo lokuphikisa i-Covid-19 lab yemvelaphi ye-hypothesis- Ilungelo laseMelika lokwazi
Umhleli oyintloko wephephancwadi lezenzululwazi elinamaqhina neChina wagunyazisa a incwadi yenkcazo ukuphikisa i-hypothesis yokuba inoveli ye-coronavirus SARS-CoV-2 ivela kwilebhu, ngokweimeyile ezifunyenwe yi-US Right to Know.
Amagqabantshintshi aqinise ingxelo yesayensi yokuqiniseka malunga nemvelaphi yendalo ye-SARS-CoV-2, intsholongwane ebangela iCovid-19, kwiiveki nje ezimbalwa emva uqhambuko lokuqala oluxeliweyo eWuhan, China.
Ukwamkelwa kwejenali yenkcazo yokupapashwa kungaphelanga iiyure ezili-12 zokungeniswa kwayo kuphakamisa inkqubo yokujonga ngokutsha oontanga ngokupapashwa kwezenzululwazi ukwenza inqaku lezopolitiko.
Amagqabantshintshi, abhalwe zii-virologists zase-US, epapashwe malunga nexesha elifanayo zesayensi iingxelo kunye a mazwi ukusuka kwizazinzulu ezingama-27 ezipapashwe kwiijenali ezahlukileyo ukuba yonke inyanzelisa ukuba i-coronavirus entsha inemvelaphi yendalo.
The ukwambula ukuba umhleli oyintloko, uShan Lu weYunivesithi yaseMassachusetts Medical School, wacela amagqabantshintshi ngeli phephancwadi Imichiza evelayo kunye nosulelo (EMIiphakamisa imibuzo malunga nokuba yayikhona na ulungelelaniso phakathi kwezinto zopolitiko nezenzululwazi ezihambelanayo ne Isikhundla sikarhulumente waseTshayina kule nto iphikisana kakhulu khupha.
Ijenali leyo ukuhlela is iphathwe yiShanghai Shangunxun yoNxibelelwano lweNkcubeko kwiChina, ngokubambisana nomshicileli uTaylor noFrancis, ozinze eNgilane. Uninzi lwabahleli bejenali kunye namalungu ebhodi zizinze China, kubandakanya ezinye ezinxulumene norhulumente waseTshayina.
EMI Amalungu eBhodi uShibo Jiang eFudan University School of Medicine kunye no-Yuelong Shu kwiYunivesithi yaseSun-Yat Sen babephakathi iqela lezenzululwazi zaseTshayina abafuna ukutshintsha igama le-coronavirus entsha Ukuyihlukanisa neChina; UDong Xiaoping ligosa likarhulumente kumaZiko amaTshayina oLawulo lweZifo, owayengunombolo-mbini oyingcali kwicala laseTshayina NgoFebruwari 2020 kunye noMbutho wezeMpilo weHlabathi ukucacisa imvelaphi ye-SARS-CoV-2.
Amagqabantshintshi kaFebruwari 2020 anesihloko esithi "Akukho bungqina bunokuthenjwa buxhasa amabango obunjineli belebhu ye-SARS-CoV-2," kwaye yabhalwa ziingcali zentsholongwane uShan-Lu Liu kunye noLinda Saif weYunivesithi yaseOhio State; USusan Weiss weYunivesithi yasePennsylvania; kunye noLishan Su, ngelo xesha owayenxulumene neYunivesithi yaseNorth Carolina. Ababhali baphikisana kwinqaku labo ngokuchasene nokuba kungenzeka ukuba i-SARS-CoV-2 ivele kwilabhu evuzayo ye-bat coronavirus egama I-RaTG13 leyo ibiyi kuhlala ngaphakathi kweZiko laseWuhan laseVuology (WIV).
I-WIV lelona ziko liphambili le-coronavirus kwaye ikwindawo ekuyo ziimayile ezimbalwa ukusuka kwisiza Ukuqhambuka kokuqala okuxeliweyo eWuhan, China. Ababhali baphinde bakugxotha ukuxhalaba malunga notshintsho lwemfuza kwiintsholongwane ezinxulumene neSARS wadalwa zizazinzulu ze-WIV ngokusebenzisana nelebhu yaseYunivesithi yaseNorth Carolina isenokuba ngumthombo weSARS-CoV-2.
Ukuza kuthi ga ngoku, izazinzulu zeWIV kunye nabasemagunyeni kurhulumente waseTshayina khange unike izazinzulu ezizimeleyo ukufikelela kwi Isiseko sedatha yeWIV yee-coronaviruses zelulwane.
NgoFebruwari 11, 2020 email, U-Liu wamema uSaif ukuba abe ngumbhali-mbhali kuyilo "olugqityiweyo" lwengcaciso malunga nemvelaphi enokubakho ye-2019-nCoV okanye i-SARSCoV-2 ukuze aphikise amanye amarhe. U-Liu uthe nge-imeyile ukuba ubhale ingxelo kunye no-Su kwisimemo somhleli oyintloko we Imichiza evelayo kunye nosulelo.
USaif uvumile ukujoyina, echaza: "Ndiyilungisile le nguqulo ndaza ndongeza igama lam njengoko nam ndiziva ndinamandla okukugxeka oku."
Saif ngokwahlukeneyo yayisayina kwi mazwi papashwa ngo Lancet ukuba ii-imeyile zibonisa ukuba zalungiswa ngu-EcoHealth Alliance kaPeter Daszak. I-EcoHealth Alliance liqela elingenzi nzuzo elinalo ifumene izigidi zeedola of Umrhafi wase-US inkxaso mali yemfuza ilawule iintsholongwane, kubandakanya noososayensi IZiko leNzululwazi yeWuhan.
NgoFebruwari 12, 2020, uLiu naye wamenywa UNjingalwazi Weiss naye abe ngumbhali-mbhali, kwaye wavuma kwangoko.
Liu ngeniswe umbhalo-ngqangi ngokuhlwa kwe-12 kaFebruwari, kwaye ngaphakathi kweeyure ezili-12, iofisi yokuhlela esekwe eShanghai kwamkelwa iphepha, nomvavanyi-ntanga omnye ephawula: Ibhalwe ngokugqibeleleyo… ndicebisa ukuba siyipapashe ngoko nangoko. ”
NgoFebruwari 2020, EMI upapashe amanye amagqabantshintshi amabini, zonke bezithandeka kwisikhundla sikarhulumente wase-China kwimvelaphi ye-SARS-CoV-2:
ngoFebruwari 4 incwadi yenkcazo osihloko sithi "HIV-1 khange ibe negalelo kwi-2019-nCoV genome" ngoososayensi base-China base-China abanobudlelwane kwiiyunivesithi zase-China; kwaye
ngoFebruwari 28 incwadi yenkcazo Isihloko esithi “Ngaba i-SARS-CoV-2 ivela kwilabhoratri? Ukuphikiswa kwebango lolwakhiwo kusetyenziswa i-laboratory, "zizazinzulu ezisekwe eShanghai ze-Chinese Academy of Science.
Impikiswano yemvelaphi iyaqhubeka
Iingcali ezibhale EMI Amagqabantshintshi awakhange ayithathele ingqalelo into yokuba izindlu ze-WIV ayipapashwa I-bat coronaviruses ezinxulumene ne-SARS, ezinokuthi zisebenze njenge template yemvelaphi yeelebhu ye-SARS-CoV-2, ngokutsho kwezinye izazinzulu. Ukuza kuthi ga ngoku, ingxoxo malunga nemvelaphi yentsholongwane isekhona evulekileyo, kwaye zikho likhula iifowuni ukuphanda iimeko zendalo kunye nemvelaphi yeelebhu.
UNjingalwazi waseStanford uDavid Relman wabhala kwi PNAS Inqaku elithi iimpikiswano ezichasene neemeko zobunjineli ngabom "ziyasilela ukwamkela into yokuba ookhokho ababini okanye ngaphezulu abangachazwanga (okt, izinyanya ezingaphezulu kukaRaTG13 kunye neRmYN02) sele zifunyenwe kwaye bezifundwa elebhu- umzekelo, enye kunye Umqolo we-SARS-CoV-2 kunye ne-spike protein-binding domain, kunye nenye ene-SARS-CoV-2 polybasic furin cleavage site. Bekuya kuba yinto efanelekileyo ukubuza malunga neempawu zentsholongwane kwaye emva koko uyenze elebhu. ”
Ii-imeyile zikaNjingalwazi wase-Ohio State u-Linda Saif, ezithi i-US Ilungelo Lokwazi zifunyenwe ngesicelo seerekhodi zikarhulumente, inokufumaneka apha: I-imeyile ye-imeyile yebatch # 1: iYunivesithi yaseOhio State (Iphepha le-303)
IiBiohazards, IBhlogazards Blog I-Covid-19, ukhuseleko kwilebhu, Imvelaphi yecoronavirus, I-SARS-CoV-2 imvelaphi yempikiswano